ဘဝဆိုတာ၊ လူကောင်းဆိုတာ၊ လူဆိုးဆိုတာ၊ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမဆိုတာ၊ ယောက်ျားဆိုတာ စသဖြင့်။ ဆိုရိုးစကားတို့၊ ပညာရှိကြီး တစ်ဦးပြောဖူးတာတို့ ဘာတို့ဆို သိပ် မှတ်လေ့မရှိတတ်။ နောက်ပြီး အောင်မြင်ရေး စာစုတို့ ဘာတို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရုတ်တရက် ဖတ်မိလိုက်ပြီး စိတ်ထဲ စွဲနေတဲ့ စာကြောင်းလေး သုံးကြောင်းတော့ ရှိပါတယ်။
Great Minds Discuss Ideas. Average Minds Discuss Events. Small Minds Discuss People. တဲ့။ ဘယ်သူပြောတာလဲ မမှတ်မိ။ ဒါနဲ့ Google ခေါက်လိုက်တော့ Eleanor Roosevelt ပြောခဲ့တာလို့ တွေ့ရတယ်။ ၃၂ ယောက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတ ရုစဗဲ့ရဲ့ ဇနီး။
ဟိုးတစ်လောက 'ရခိုင့်နိုင်ငံရေး အမှောင်ခြမ်း' ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရယ်၊ မနေ့ကမှ တင်တဲ့ 'စစ်ကောင်စီ၏ ရခိုင်ပြည်တွင်းက ယာလည်းညက်၊ ကြက်လည်းပန်း' ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရယ်ကို တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်တွေ ကြည့်ပြီး အတွေးပွားမိတာရယ်ပါ။
ဆောင်းပါးနှစ်ခုလုံးမှာ စာရေးသူက 'ယောနသံ'။ ရေးတဲ့လူက Pseudonym သုံးထားတာ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှန်း မသိကြ။ အဲ့ဒီမှာ ရေးတဲ့လူနဲ့ ဒီဆောင်းပါး တင်တဲ့လူကို စောင်းမြောင်းရေးကြ၊ တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး ရေးတယ် စသဖြင့်။ လူအကြောင်းပြောတာ၊ လူကို အဓိကထား တိုက်ခိုက်တာပေါ့။
အမှန်တော့ အဲ့ဒီ စာရေးသူ ယောနသံ ဆိုတာ ရခိုင်မှာ မွေး၊ ရခိုင်မှာကြီးပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ရခိုင်တပြည်နယ်လုံး လူးလာခေါက်တုံ့ ခရီးတွေသွားနေသူ တစ်ယောက်။ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်ထဲ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်နေသူဆိုတာ မသိကြ။ ဒါကတော့ ပြဿနာလို့ မဆိုနိုင်။ ပြဿနာက စာရေးသူပြောတဲ့၊ ထောက်ပြတဲ့ အချက်တွေကို မဆွေးနွေးကြဘဲ လူနဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို တိုက်ခိုက်တာ။ စောင်းမြောင်းတာ။
ဖြစ်ရပ်အများစုကို ကြည့်ရင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်၊ ထင်မြင်ချက်နဲ့ မတူရင် နာမည်၊ လူ၊ အဖွဲ့အစည်းကို အဓိကထား တိုက်ခိုက်ကြလေ့ရှိတယ်။ ဘာပြောသလဲ၊ ရှုထောင့်ကဘာလဲ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလားဆိုတဲ့ အချက်ကို စောကြောလေ့မရှိကြ။ အယ်လီနာ ရုစဗဲ့ အဆိုအရဆိုရင် 'Ideas' ကို ဆွေးနွေးလေ့မရှိကြ။
အဲ့ဒီကနေ Conspiracy Theory အကြီးကြီးတွေ ထိုင်ထုတ်ပြီး ရေးလိုက်ကြတယ်ဆိုတာ။ ပြောရရင် တချို့က Conspiracy Theorist လို့တောင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် နာမည်တပ်လို့မရတဲ့ စာရှည်ကြီးတွေ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရပ်ကွက်နဲ့ သူ့ပရိသတ် အထာတော့ အတော်ကျ။
စာရေးသူ ယောနသံကတော့ လုံခြုံရေးကြောင့် ဒီလိုပဲ ဆက်ပြီး Pseudonym ပဲ ဆက်သုံးသွားမယ်လို့ ဆိုတယ်။ သူကတော့ ကွယ်ရာပဲ ကျိတ်ရီနေတော့တာပဲ။ ကျနော့်မှာလည်း သုံးစက္ကန့် ဆွံ့အ။ မသိရင် အဲ့ဒီဆောင်းပါးတွေကို နိုင်ငံခြားကနေပဲ ရေးနေသလိုလို ဆိုတာကိုး။